के नराम्रो सपना देख्नुभयो ? नआत्तिनुहोस् , यस्तो उपाय गर्नुस् | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
के नराम्रो सपना देख्नुभयो ? नआत्तिनुहोस् , यस्तो उपाय गर्नुस्
एजेन्सी । रातीमा देखिने सपनाले हाम्रो भविष्यमा हुन गइरहेका राम्रो तथा नराम्रो घटनाको संकेत दिने गर्दछ । शास्त्रीय मान्यता अनुसार रातको पहिलो प्रहरमा देखिएको सपनाको फल एक वर्षभित्र मिल्छ भने रातको दोस्रो प्रहर देखेको सपनाको फल ६ महिनाभित्र पाइन्छ ।
त्यसैगरी रातको तेस्रो पहर देखेको सपनाको फल तीन महिनाभित्र पूरा हुन्छ भने चौथो प्रहर यानी बिहान सबेरै देखेको सपनाको फल केहि दिनमै मिल्दछ ।
सपनाको विभिन्न शुभ तथा अशुभ संकेत शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । राम्रो सपना देख्दा जोकोहि खुशी हुने गर्छन् तर नराम्रो सपनाले सबैलाई दुःखी बनाउँछ । केहि सपना यस्तो हुन्छन् जसमा देखिएको दृश्य सम्झेर नै हामी डराउने गछौँ । सपनामा भूत, आत्मा, कसैको मृत्यु वा आफ्नै मृत्यु वा केहि भयानक दृश्य देख्नाले जब हामी बिउँझिन्छौँ तब पसिनाले भिजिराखेको हुन्छौँ ।
यदि तपाईलाई सपनामा देखेको कुनै पनि कुराले भविष्यमा नोक्सान पुर्याउने र अनिष्ट हुनेजस्तो लाग्छ भने केहि शास्त्रीय उपाय छन् जसलाई अपनाउनाले तपाई नराम्रो सपनाको असरबाट बच्नसक्नुहुन्छ ।
-जसलाई राती बारम्बार एउटै सपना आउने गर्छ वा नराम्रो सपना आउँछ र अचानक निद्राबाट बिउँझिने हुन्छ ती व्यक्तिहरुले आफ्नो सिरानीमूनि एक खुल्ला चक्कु राख्दा यस्तो समस्याबाट छुटकरा मिल्छ ।
-नराम्रो सपना आयो भने हनुमानको ध्यान र जप गर्नुपर्दछ । नराम्रो सपना र अनिष्टबाट बच्न हनुमान चालीसा को पाठ गर्नु उत्तम हुन्छ ।
-यदि तपाईले अति नै नराम्रो सपना देख्नुभयो र तपाईको घरमा तुलसी छैन भने बिहान उठेर सेतो कागजमा सपना लेख्नुहोस् र त्यसलाई जलाई दिनुहोस् र खरानीलाई नालीमा बगाइदिनुहोस् । त्यसपछि नुहाएर एक मालालाई लिएर शिवको मन्त्र “ॐ नमः शिवाय” को जप गर्नुहोस् । सपनाबाट हुने दुष्प्रभाव नष्ट भएर जानेछ ।